Snapchat တွင် Cache ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းမည်နည်း။
29 / 11 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
Snapchat သည် ယနေ့ဈေးကွက်တွင် ရေပန်းအစားဆုံး ဆိုရှယ်မီဒီယာအက်ပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံများ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၏ သဘောတရားသည် လူအများကြားတွင် စွဲစွဲမြဲမြဲ စွဲလန်းနေပြီး စစ်ထုတ်မှုအသစ်များနှင့် ဖန်တီးမှု ဗီဒီယိုဖော်မတ်ချခြင်း ရွေးချယ်မှုများ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာဂိမ်းတွင် ကြီးမားသောရိုက်ချက်များဖြင့် နှိမ့်ချသောအက်ပ်ကို ခွင့်ပြုထားသည်။
Snapchat သည် နှစ်များတစ်လျှောက် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများ ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန်အတွက် အမှတ်တံဆိပ်ပါသော အသံအကြောင်းအရာများကို ၎င်းတို့၏ snaps များအတွင်း ပူးတွဲထည့်သွင်းခွင့်ပြုနိုင်စေရန် ထိပ်တန်းတေးဂီတအညွှန်းအချို့နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Snapchat စတင်ခဲ့သည့်နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်အသစ်မှာ ငွေရှာခြင်းအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် Youtube ပါတနာပရိုဂရမ်ကဲ့သို့ သိသိသာသာမဟုတ်သော်လည်း၊ Snapchat သည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ snaps များမှတစ်ဆင့် ဝင်ငွေရရှိရန် ခွင့်ပြုလိုသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။
သင့်သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် မိသားစုထံ ပေးပို့ရန် လျှပ်တစ်ပြက်များကို ဖန်တီးနိုင်သည့် အဓိကနည်းလမ်း နှစ်ခုရှိသည်။
စမ်းသပ်ပြီး စမ်းသပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံစတိုင်ကို သင်သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဤအရာတွင်၊ သင်သည် Snapchat အက်ပ်ရှိ ကင်မရာအက်ပ်ပါရှိသော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို နှိပ်ပြီးနောက် အမှတ်အသားပြုကာ စတစ်ကာများနှင့် စာသားများကို ထည့်နိုင်သည်။ သင်ကျေနပ်သည်နှင့်၊ သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများထံ snap ပေးပို့နိုင်သည်။ လက်ခံသူအတွက် snap ကိုရရှိနိုင်မည့်ကြာချိန်ကိုလည်း သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံများသည် သင့်အရာမဟုတ်ပါက၊ လျှပ်တစ်ပြက်ပုံစံဖြင့် သင့်သူငယ်ချင်းများထံ ဗီဒီယိုများပင် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရန်၊ အမှတ်အသားပြုလုပ်ရန်၊ ၎င်းကို စတစ်ကာများ သို့မဟုတ် စာတန်းများဖြင့် အလှဆင်ရန် တူညီသောကင်မရာအက်ပ်ကို အသုံးပြုကာ ၎င်းကို သင်နှစ်သက်ရာ လက်ခံသူ/လက်ခံသူများထံ ပေးပို့ပါ။
ဘတ် Signal Messaging App တွင်ပရိုဖိုင်းပုံတစ်ခုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
သင် Snapchat အက်ပ်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေချိန်တွင်၊ စက်ပေါ်ရှိ ကက်ရှ်သည် စတင်တည်ဆောက်ပြီး ဖုန်းမမ်မိုရီတွင် သိုလှောင်မှုနေရာကို စတင်သိမ်းပိုက်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤကက်ရှ်သည် ဆက်လက်တည်ဆောက်နေပါက၊ စနစ်မှတ်ဉာဏ်တွင် သင်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိပြီး အက်ပ်အား အသုံးပြုနေစဉ်တွင်ပင် နောက်ကျနေနိုင်သည်။
ဤသင်ခန်းစာတွင်၊ Snapchat ရှိ cache ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
အဆင့် 1. သင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် Snapchat အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် 2. ပင်မစာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်ထိပ်ရှိ ပရိုဖိုင်အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 3. ပရိုဖိုင်စာမျက်နှာတွင်၊ ပရိုဖိုင်ဆက်တင်များကိုထည့်သွင်းရန် 'Gear' အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 4. ဆက်တင်များ မီနူးကို ရွှေ့ပြီး 'Clear Cache' ရွေးစရာကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 5. လုပ်ဆောင်ချက်ကို အတည်ပြုရန် 'ရှင်းလင်းရန်' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် သင့်စက်ပစ္စည်းမှတ်ဉာဏ်မှ သိမ်းဆည်းထားသော ကက်ရှ်ဒေတာအားလုံးကို ရှင်းလင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ် အက်ပ်ကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ၊ သိမ်းဆည်းထားသော ဒေတာကို ရှင်းလင်းသွားပါမည်။
Snapchat ကို Android နှင့် iOS တို့တွင် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်အက်ပ်အဖြစ် ရရှိနိုင်သည်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လင့်ခ်များ။
Android အတွက် Snapchat – ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
iOS အတွက် Snapchat – ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
လွန်ခဲ့သော Facebook ပေါ်ရှိ သင့်စာမျက်နှာကို မှန်ကန်စွာ ဖျက်နည်း
နောက်တစ်ခု Zoom ခေါ်ဆိုမှုတွင် လူမည်မျှနေနိုင်မည်နည်း။